Magweta epasi rose Ekuunganidza Zvikwereti muNetherlands - Law & More
Kuunganidza Chikwereti uye Kubatanidza Kwezvinhu muNetherlands
Tsvagiridzo inoratidza kuti 30% yemabhengi muNetherlands anokonzerwa neinvoice isina kubhadharwa. Ko kambani yako ine mutengi uyo anga asati abhadhara? Kana kuti uri munhu akazvimiririra uye une mukweretesi uyo achiri kukwereta mari iwe? Wobva wabata iwo Law & More magweta ekuunganidza zvikwereti.
CHIKwereti CHOKWANISA GWAYERI MUNE NETHERLANDS?
MARI MITEME YAKO ZVINOKOSHA MU DUTCH LAW
Isu tinoshandiswa kushandira vatengi vemuno nevekunze.
Nzvimbo yepamusoro yebasa yemutengi wese, vanhu vamwe pamwe nemakambani kana masangano.
Isu tinowanikwa. Zvakare nhasi.
Gweta rekuunganidza Gweta
Tsvagiridzo inoratidza kuti 30% yemabhengi muNetherlands anokonzerwa neinvoice isina kubhadharwa. Ko kambani yako ine mutengi uyo anga asati abhadhara? Kana kuti uri munhu akazvimiririra uye une mukweretesi uyo achiri kukwereta mari iwe? Wobva wabata iwo Law & More magweta ekuunganidza zvikwereti. Isu tinonzwisisa kuti mavoice asina kubhadharwa anogumbura uye haadi, ndosaka tichibatsira iwe kubva pakutanga kusvika kumagumo ekuunganidza. Magweta edu ekuunganidza zvikwereti anokwanisa kuenda kuburikidza neyese nzira yekuwedzera yekuunganidza uye nzira yekutonga yekutonga pamwe newe. Law & More inozivikanwa zvakare nemutemo wekubatanidzwa uye inogona kukubatsira iwe mune chiitiko chekubhuroka. Chekupedzisira, hazviite mutsauko kwatiri kuti mukweretesi anogara muNetherlands kana akasimbiswa kune imwe nyika. Nekuda kwemaitiro edu epasi rese, isu takakodzera kuwana zvimwe zvakawomarara, zvinopokana kana hombe.
> Matanho ezviitiko zvekuunganidza
> Nhanho-nhanho chirongwa chekwereti kuunganidza maitiro
Kana zvasvika pakuunganidzwa kwezvikwereti, iwe ungangodaro uchifunga nezvechikwereti chekuunganidza chikwereti kana bailiff pane yeaiti yekuunganidza chikwereti. Izvi zvinodaro nekuti mapato ese matatu anokwanisa kutora zvikwereti zvisati zvabhadharwa. Nekudaro, pane mamwe matanho akakosha muhurongwa hwekuunganidza ayo muhupamhi anogona kuitwa negweta rekuunganidza chikwereti:
CHIKwereti CHOKUWANISA GWEDZI
CHIKwereti CHEMAHARA AGENCY
Unganidza invoice yakatanhamara
Kubatwa kwemhedzisiro yemumba uye mukwereti mari
Faira chikumbiro chekubhuroka
Kugadzirisa kusawirirana kwepamutemo uye nekupa maitiro
Litigation yezvikwereti zviri pamusoro peEUR 25,000
Kubata makesi epasi rose ekuunganidza zvikwereti
munguva yakatarwa. ”
Nhanho-nhanho chirongwa chekwereti kuunganidza maitiro
1. Amicable chikamu. Kana chikumbiro chako chichiunganidzwa, zvino nzira ine rugare inogona kutanga yatanga nemagweta ekuunganidza zvikwereti zve Law & More. Muchikamu chino, isu tinoedza kunyengetedza uyo ane chikwereti kuti abhadhare kuburikidza netsamba uye / kana kufona, zvingangowedzerwa nemari yepamutemo yekufarira uye yekuwedzera mari yekutora.
2. Nhaurirano. Iwe une hukama hwakanaka neumwe wako, uye ungade here kuchengetedza iyi hukama hwakanaka? Muchikamu chino, isu tinoedza kuwana chibvumirano pakati pemapato kuburikidza nekutaurirana uye, semuenzaniso, kuita gadziriro yekubhadhara.
3. Chikamu chekutonga. Kuenda nenzira ine rugare hakusi kwekumanikidza. Kana waakakwereta akasabatira pamwe, magweta edu ekuunganidza zvikwereti anogona kutora masamanisi oatumira kune wako waakakwereta. Nemasamanisi, mukweretesi anoshevedzwa kuti amire pamberi pedare pane rimwe zuva. Muchikamu chepamutemo, tinoti kubhadharwa kwemari yakasara uye mari yekuunganidza pamberi pedare.
4. Mutongo. Mushure mekunge wako ane chikwereti agamuchira iyo subpoena, iye anozopihwa mukana wekupindura kuchisungo nekunyora. Kana uyo ane chikwereti akasapindura uye akasazviratidza pakunzwa, mutongi achapa mutongo asipo paanopa chikumbiro chako. Izvi zvinoreva kuti wako ane chikwereti anofanirwa kubhadhara invoice, iyo yemutemo chimbadzo, mari yekutora uye maitiro ehurongwa. Mushure mekutongwa kwaziviswa nemutongi, bailiff anozopa mutongo uyu kune ane chikwereti.
5. Mutongo. Maitiro epamutemo asati atangwa, zvinokwanisika kutora chivakwa chemunhu ane chikwereti. Izvi zvinodaidzwa kunongedzera kwekuchengetedza. Kuchengetedza chinosungirwa kunoitirwa kuona kuti uyo ane chikwereti haakwanise kurasa chero chinhu mutongi asati aita sarudzo, kuitira kuti iwe ugone kudzosera mari yako kubva kune ane chikwereti. Kana mutongi akapa chikumbiro chako, chisungo chekutonga chisati chashandurwa kuita chinosungirirwa. Izvi zvinoreva kuti midziyo yakatorwa inogona kutengeswa pachena nemubatsiri kana iye ane chikwereti asati aripa. Mhosva yako ichabhadharwa pamwe nemari yezvinhu izvi.
Maitiro egweta rekuunganidza zvikwereti
Nhanho dzakatsanangurwa pamusoro apa dzinofanirwa kutorwa kune yega nzira yekuunganidza. Asi chii chaungatarisira kubva Law & More'magweta ekuunganidza zvikwereti kana uchifamba nematanho aya?
Kuongorora uye kuraira pachinzvimbo chako chepamutemo
• Kutaurirana zvakananga uye pachako, zvese nefoni uye e-mail
• Hunhu uye kubatanidzwa
• Ita nekupindura nekukurumidza uye nenzira kwayo
• Kugara pamusoro penyaya
• Gara uchifunga kumberi uye gadzirira zviitwa zvinotevera
Zvekuita chikwereti kuunganidza gweta
• Chengetedza mazwi ekubhadhara uye ongororo dzekuongorora
• Kutaurirana nevane chikwereti
Kunyora nekutumira chiziviso chekutadza
• Kudzivirira kunyorerwa uye kushandiswa kwekukanganisa
Kuitisa zviri pamutemo
Kubata uye kuita kuuraya
• Kubata makesi epasi rose ekuunganidza zvikwereti
Chii chinonzi mutemo wekuunganidza zvikwereti?
Mutemo wekutora chikwereti muNetherlands une chekuita ne (extrajudicial) kuunganidzwa kwemari inotaurwa. Paunopa ma invoice akasarudzika kumagweta ekuunganidza zvikwereti, urikupa mhando yemvumo kumagweta ekuunganidza zvikwereti zvinoenderana nemutemo wekutora chikwereti kuti utore zvikwereti zvako zvasara. Uyu mukana, semuenzaniso, kune vanhu vakazvimiririra kana makambani ane nguva shomana kana ivo vanoda kutarisisa zvakanyanya pabhizimusi ravo repamoyo. Uye zvakare, ese marudzi emitemo akasungirirwa kune (iko kuunganidzwa kwe) ma invoice akasarudzika, semuenzaniso zvine chekuita nekuremerwa uye kunyorerwa, uye kune mapato akati wandei anobatanidzwa. Izvi zvinoita kuti mutemo wekutora chikwereti unakidze, asi wakaomarara. Ndosaka zvichikurudzirwa kuita gweta rekuunganidza zvikwereti kana iwe uine zvikwereti zvisati zvaitika. Law & More'' Magweta inyanzvi mumutemo wekutora chikwereti uye vanofara kukubatsira.
Chii chinonzi chiziviso chekutadza?
Nhanho yekutanga iyo inofanirwa kutorwa ndeyekuzivisa ane chikwereti kuti haana kuzadzisa muripo wake wekubhadhara. Iwe unofanirwa kumupa iye mukana wekubhadhara mukati inonzwisisika nguva pasina imwezve mari. Unotumira chiyeuchidzo chakanyorwa kune ane chikwereti, ichi chinonzi chiziviso chekutadza. Nguva yemazuva gumi nemana inowanzoonekwa senguva inonzwisisika mukati mekuti mukweretesi anokumbirwa kubhadhara chikwereti. Sezvingatarisirwa, Law & More'Magweta ekuunganidza zvikwereti anogona kukugadzirira chiziviso chekukanganisa iwe. Kana pasina ziviso yekutadza kutumirwa, dare richaramba chero chikumbiro chekukuvara. Zvisinei, pane mamiriro ezvinhu umo kutumira chiziviso chekutadza hakudi, semuenzaniso kuzadzikiswa kwechibvumirano hakuite zvachose. Zvakangodaro, zvinokurudzirwa kuti ugare uchitumira chiziviso chekutadza kuti uve nechokwadi. Kana chikumbiro chekubhadhara chikasateedzerwa, tinogona kutanga maitiro ekuunganidza.
Ndeapi ruzivo rwunodiwa negweta rekuunganidza chikwereti?
• Zvinyorwa zvemukweretesi uye ane chikwereti
Magwaro ane chekuita nechikwereti (nhamba yeinvoice nezuva)
• Chikonzero icho chikwereti chisati chabhadharwa
Chibvumirano kana zvimwe zvirongwa zvine chekuita nechikwereti
• Tsananguro yakajeka uye kupembedzwa kwemari yakweretwa
• Chero kunyorerana pakati pemukweretesi nemukweretesi maererano nechikwereti
Kudzivirira njodzi: unozviita sei iwe?
Law & More inopawo rutsigiro rwekudzivirira njodzi dzine chekuita nekubhadhara uye kubhadhara kunonoka. Semuenzaniso, isu tinopa zano vatengi kuti vasanganise mamiriro ekubhadhara mune zvakajairwa mamiriro uye mamiriro anogona kudzivirira ambiguities mune chiitiko chekunonoka kubhadhara. Ungada here rumwe ruzivo nezve izvi? Ndokumbirawo ubate magweta ekuunganidza e Law & More.
Chikwereti chiri kunze kwenyika?
Anokwereta ari kunze kwenyika here? Pakadaro, zvinhu zvakasiyana zvinogona kutora chinzvimbo, senge mutauro wakasiyana, tsika uye maitiro ekubhadhara, zvinoreva kuti njodzi mune mamiriro ekutora nzira dzakakura kupfuura nevane chikwereti vanobva munyika mavo. Nekudaro, kune avo vanounganidza zvikwereti magweta e Law & More, zvinhu izvi hazviumbe chipingamupinyi. Hatizorega miganho ichitimisa uye saka tinofara kukutungamira kuburikidza neyakaunganidzwa nzira iyo uyo ane chikwereti akazvimisikidza pachezvake, mukati kana kunze kweEurope. Iwe ungade here kuziva izvo zvatinogona kukuitira kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita. Ndapota taura Law & More. Magweta edu achafara kukubatsira.